DEG DEG: Cumar Al Bashiir oo dacwad lagu soo oogay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN DEG DEG: Cumar Al Bashiir oo dacwad lagu soo oogay
DEG DEG: Cumar Al Bashiir oo dacwad lagu soo oogay
isniin-May-13-2019(HNN) Suudaan ayaa dacwad kusoo oogtay madaxweynihii xukunka laga tuuray ee dalkaas, Cumar Xasan Al Bashiir, waxaana lagu soo oogay inuu geystay kicin dadweyne iyo inuu ku lug lahaa dil loo geystay dibadbaxyaal, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay dacwad oogaha guud ee waddankaas.
Ilaa hadda lama hayo wax war ah oo ku saabsan xaaladda Al Bashiir tan iyo markii xukunka laga qaaday 11-kii bishii April.
Horraantii bishan, waxaa Al Bashiir lagu amray inuu kasoo hor muuqdo xafiiska dacwad oogaha dalkaas si wax looga weyddiyo eedeymo musuq maasuq iyo maalgelinta ururo argagixiso.
Previous articleShirkad xabaalaha qodda oo suuq la’aan soo food saartay.
Next articleDAAWO: RW Khayre oo magacaabay guddi dhamays-tiraya qorshaha dayn cafinta Dalka